It is me. Ko Niknayman.: ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲမှ စုစုပေါင်း (၃၄၄) ယောက်ရဲ့ အသေးစိတ်စာရင်းပါ။
ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲမှ စုစုပေါင်း (၃၄၄) ယောက်ရဲ့ အသေးစိတ်စာရင်းပါ။
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာနတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးပို့ ပေးပါရန်။ http://www.mediafire.com/?24pg4yxnjti(Updated – 30 September 2007)
Posted by Ko Niknayman at 8:21 PM